Khipha ku-internet Egg isaladi Recipe - Ungadliwa
upheka isikhathi esingakanani ubhekeni we-turkey
izinkomishi ezingaki ezomisiwe zerayisi ezizophekwa
indlela yokwenza ushizi calzone
ungatshela kanjani ukuthi ngabe ubhekeni lwe-turkey lwenziwe yini
Khipha ku-internet Egg isaladi Recipe
I- Khipha ku-internet Egg isaladi Recipe kuyinto intandokazi elula! Ayikho ipikinikini ephelele njenge amaqanda abilisiwe kanzima kuxutshwe ne-mayo kanye nengcosana yesinaphi futhi empeleni kuyashuba ngesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi no-anyanisi oluhlaza!
Noma ngabe wenza isangweji lesaladi leqanda noma isaladi leqanda elinempilo usebenzisa ulethisi noma ukusonga okuncane kwe-carb, akukho lutho oluthi 'wonke amaMelika' afana nesaladi leqanda!
gyro ... yini yakudala
Kuyoze kube nini ubilisa amaqanda we-Egg Salad
Ngisebenzisa le ndlela ku- amaqanda aphelele abilisiwe zikhathi zonke. Baphuma namathenda amhlophe aphekiwe kanye namaphakathi amnandi akhilimu (ngaphandle kwendandatho empunga).
Ngiwaletha kumathumba bese ngiwasusa emlilweni bese ngihlala ngihlanganiswe imizuzu engu-15-17 (amaqanda amakhulu). Gijima ngaphansi kwamanzi abandayo bese uxebula eyodwa ukuze uqiniseke ukuthi iphelele.
Indlela Yokwenza Isaladi Leqanda
Ngabe Amaqanda Akho Asha? Iresiphi enhle kakhulu yesaladi leqanda iqala ngezithako ezinhle. Amaqanda amasha azopheka kangcono futhi abukeke ekhanya. Iqanda elisha lizobeka ohlangothini lwalo ngaphansi kwembiza egcwele amanzi, uma likhule kancane, lisazocwila, kodwa lihlale ohlangothini olulodwa. Ungawadli amaqanda uma entanta ebusweni bamanzi, lokhu kusho ukuthi sekuphelelwe yisikhathi.
Qiniseka ukuthi usika kahle u-anyanisi nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngakho izingcezu zincane kunezingcezu zeqanda!
Ungayenza isaladi le-broccoli ngaphambi kwesikhathi
Ukwenza Amasangweji Esaladi Leqanda
Hlanganisa izikhupha ngemayonnaise kuze kube bushelelezi ngokuphelele bese ugoqa abamhlophe. Lokhu kwenza isaladi leqanda elihle kunazo zonke, liphuma likhilimu!
Ngisebenzisa i- isisiki seqanda ukusika abamhlophe bebeka okumhlophe kusiki, usike bese ujika iqanda ulibeke futhi. Yenza ukusika kusheshe impela! Ngisebenzisa isilayi sami seqanda kwezinye izinto njengama-strawberry, i-kiwi futhi kuhle kakhulu ukusika amakhowe ukwenza inkukhu marsala .
Isidlo sasemini esiphelele
Bilisa, upholise bese uxebula amaqanda. Sika phakathi, susa izikhupha bese usika abamhlophe.
Mash the izikhupha zamaqanda ngemayonnaise, lwesinaphi nosawoti kanye nopelepele ukunambitha.
Faka abamhlophe bamaqanda abaqoshiwe no-anyanisi oluhlaza, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, idile entsha eqoshiwe. Hlanganisa ngokucophelela bese ukhonza kubanda ngesinkwa, isaladi, noma ukugoqa!
Ngokuthatha okusha, zama ukwenza isaladi leqanda le-avocado nge-avocado ecubuziwe! Ukuthatha okunempilo okuhle ku-classic yaseMelika!
Ihlala Isikhathi Eside Kangakanani Isaladi Leqanda?
Usho uma kukhona okusalile? Kulula kakhulu ukusho uma isaladi leqanda selikulungele ukuphonswa. Izothola amanzi futhi ilahlekelwe umbala wayo okhanyayo! Kodwa kunamathuba, le iresiphi yesaladi leqanda ngeke ihlale isikhathi eside endlini yakho!
Amasaladi Alula Ngini
Isaladi leShrimp - kuhle kuma-croissants
I-Best Potato Salad Recipe (Elula) - imnandi kakhulu
I-BEST Chicken Salad - amasangweji amahle kakhulu!
Isaladi likaHam - Kuhle ngokusalela!
Isaladi likaWaldorf - Okusha nokusha!
Isaladi le-Tuna yakudala - Easy iresiphi enkulu phezu ulethisi noma ngesinkwa!
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokupheka10 imizuzu Isikhathi Esipheleleamashumi amabili imizuzu Izinkonzo4 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Ayikho ipikinikini enedlula iresiphi yesaladi elikhilimu! Phrinta Phina
▢8 amaqanda ibilisiwe kanzima futhi ipholile
▢1 ½ amathisipuni lwesinaphi esiphuzi
▢1 u-anyanisi oluhlaza kusikiwe okuncane
▢1 ubambo isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi eqoshiwe
▢ezimbili amathisipuni idile entsha oqoshiwe
Yini i-marinara sauce vs isoso se-spaghetti
Sika amaqanda ngesigamu. Susa izikhupha usike abamhlophe.
Izikhupha zeMash ezinemayonnaise, lwesinaphi nosawoti & pepper ukunambitha kuze kube bushelelezi futhi kube nokhilimu.
Engeza izithako ezisele bese uvuselela kahle.
Khonza ngesinkwa noma ngaphezulu kwelethisi.
Amakholori:320,Amakhabhohayidrethi:1g,Amaprotheni:ishumi nanyeg,Amafutha:29g,Amafutha agcwalisiwe:6g,Cholesterol:339mg,I-Sodium:332mg,Potassium:147mg,Ushukela:1g,Uvithamini A:570IU,Uvithamini C:0.9mg,I-calcium:53mg,Insimbi:1.6mg
Igama elingukhiyeisaladi leqanda InkamboIsidlo sasemini, isaladi KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
REPIN le Recipe Elula